Ruuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Ruuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame
Ruuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame
Ruuziin sobaa laastikii irraa hojjatame Naayjeeriyaa keessatti too’annaa jala oole. Ruuzni sobaa kuni laastikii ‘waan baqu’ irraa kan tolfamee fi gara Naayjeeriyaatti yoo seenu buufata doonii irratti too’annaa jala kan ooluun isaa beekameera. Maddi isaa Chaayinaa yoo ta’u kan gara Naayjeeriyaati seensisuudhaaf yaalan daldaltoota biyyattiiti.
Ruuziin laastikii irraa tolfame kana ijaan ilaaluudhaan isa dhugaatiin adda baasuunn heddu kan nama rakkisu ta’uu isaa dubbatama. Garuu yoo ulatanii follii keemikaalaa qaba. Yoo ibiddi dhaye ammoo ni baqa. Ruuziin kuni gabaa irra oole osoo ta’ee ummata irra rakkoo fayyaa guddaa geessa ture jedhama. Yeroo dheeraadhaaf bowwoo biyyoota Afrikaa heddu ta’ee kan ture waa’ee dawaaa sobaati.
Ruuziin laastikii irraa tolfame woggaa dabre biyya Chaayinaatti yeroo jalqabaaf mudhachuu isaatu gabaafame. Rakkoon kanaa fi kanafakkaatu irraa ummanni keennas uf eeguu qaba.
Previous articleWoyyaaneen Oromoota baatii lamaa oliif hiitee dararaa ture keessaa 9,800 gadi lakkisuudhaaf
Next articleIstuudiyoo OMN Kaayiroo irratti saamichi raawwatame